#IBC2018 အဆိုပါ Show ကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့! - အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့်သတင်းများ NAB ပြရန်။ NAB ပြရန်, NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်လွှင့်
Home » အသားပေး » #IBC2018 အဆိုပါ Show ကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့!
အဆိုပါ IBC ပြရန် 2018 ဆက်ဆက်အားလုံးတက်ရောက်ခြင်းများအတွက်တက်ကြွအတွေ့အကြုံကိုပေးလိမ့်မည်ဟုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြပွဲနှင့်ကွန်ဖရရွေးချယ်မှုနှင့်အတူထုပ်ပိုးထားသည်။ ဒီအနှစ်, အ RAI အမ်စတာဒမ်မှာစက်တင်ဘာလ၌နှစ်စဉ်ကျင်းပ #IBC2018 အဆိုပါရပါလိမ့်မယ် စက်တင်ဘာလ 13th-17th စတင်ညီလာခံအချိန်ဇယား နှင့် စက်တင်ဘာလ 14th-18th စတင်ပြပွဲ။ အဆိုပါကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းများသင့်ရဲ့စည်းဝေးကြီးကြမ်းပြင်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ညီလာခံမဆိုတက်ရောက်ခြင်းရှိမရှိဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီးစိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်။
အဲဒီမှာတက်ရောက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကနေကွန်ဖရဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်အများအပြားကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ကြ၏ Alumni မှတ်ပုံတင်ခြင်း (သင်ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ပြပွဲဧည့်သည်အဖြစ်လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်း IBC တက်ရောက်ခဲ့သည်ရာ), သို့မဟုတ်စာနယ်ဇင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း (သင်အသိအမှတ်ပြုလျှောက်ထားချင်ပါတယ်ဘယ်မှာ) နှင့် ၏သင်တန်း, (IBC2018 ပြသခဲ့သည်အားလုံးညီလာခံအပေါ် 30% လျှော့စျေးများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီပြသခဲ့သည်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြတ်သန်းပါတယ်။ E-ဇုန်ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ pass စည်းရုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်တော်မူသောသင်တို့ရပ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်သည်သင်၏ညှိနှိုင်းရေးမှူးဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်သင်လျှင်အဘယ်သူသည်မသိလျှင် မဆိုမေးခွန်းများဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် registration@ibc.org) ။ ထောက်ပံ့သင့်ရဲ့ရွေးချယ်ရေးများအတွက်ဟိုက်ပါလင့်ခ်ဖြစ်ပါသည်: ibc.itnint.com/IBC18/Online/CreateAccount.aspx?wf=attendee&stream=attendee&sourceCode=IBC061&cart=
အားလုံးကိုသင့်အဘို့ ခရီးသွားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် ရန် (နှင့်တစ်လျှောက်လုံး) အမ်စတာဒမ်၏လှပသောမြို့သင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နိုင်အောင်, IBC ကြောက်မက်ဘွယ်လင့်များထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ မှခရီးသွားတစ်ဝှမ်းလူအပေါင်းတို့သည် ရအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အများဆုံးကုန်ကျ-ထိရောက်သောနည်းလမ်းရှာ #IBC2018 IBC ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကလေကြောင်းလိုင်းမိတ်ဖက်ထံမှသီးသန့်အထူးလျှော့စျေးကိုသုံးပြီး, ဒီမှာကသင်၏နေထိုင်သွားလာရင်းစဉ်အတွင်းန်းကျင် get ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေသင်ယူ: show.ibc.org/visit/travel
အားလုံးကိုသင့်အဘို့ နေရာထိုင်ခင်းလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့် IBC လျှော့နှုန်းထားများပူဇော်နှင့်သင်သည်သင်၏ဘတ်ဂျက်နှင့်လိုအပ်ချက်များ fit မှ IBC2018 များအတွက်နေရာထိုင်ခင်းစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ကြသည်ကိုသေချာစေရန် RAI ဟိုတယ်၌န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ ဤနေရာတွင် go: show.ibc.org/visit/accommodation
အတွက် RAI နေရာသတင်းအချက်အလက်များ အမ်စတာဒမ်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးဥရောပမှာရှိတဲ့ဦးဆောင်သည့်နိုင်ငံတကာပြပွဲနှင့်ကွန်ဂရက်စင်တာများတကဒီမှာသွားပါ: show.ibc.org/visit/venue
အမ်စတာဒမ်၏လှပသောမြို့အကြောင်း သမိုင်း, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လှုပ်ရှားမှုများမတူနိုင်တဲ့ပမာဏနှင့်အတူစည်ကားနေပါတယ်ဥရောပအချက်အချာ။ အသက်ရှု-ယူပြီးတူးမြောင်းနှင့်လက်ရာမြောက်သောဗိသုကာနှင့်အတူ, ဤမြို့သည်အလွန်အံ့သြစေရန်တာတွေရပ်စဲဘူး။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအဘို့, သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး Iamsterdam website က။
ဒီမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်စည်းဝေးကြီးတစ်ခုကိုနှင့်ကွန်ဖရဘို့မှတ်ပုံတင်ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ဒါဟာသိပ်နောက်ကျမဟုတ်ပဲ! ထုတ်လွှင့်မဂ္ဂဇင်း features နဲ့ဖြစ်ရပ်များကိုပိုမို In-depth ကိုလွှမ်းခြုံပေးအဖြစ်, ထုတ်ကုန်လိုက်မီးထိုးလိမ့်မည် Beat!
1967 ကတည်းက IBC ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း, ဖန်တီး, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများ၏ပို့ဆောင်မှုအတွက်စေ့စပ်ပညာရှင်များများအတွက်သြဇာအရှိဆုံးနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်လာမှစိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ မူလကနိုင်ငံတကာအသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း, IBC ယင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်သည်အမြစ် မှစ. ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးယနေ့ကအလိုအလျောက် Workflows ကနေအမြင့်ဆုံး resolution ကဖမ်းယူခြင်းနှင့် display ကိုမှ, အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာကနေဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံမှ, မီဒီယာဖန်တီးမှုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်ဖြန့်ဝေ၏တပြင်လုံးကိုအနံလွှမ်းခြုံ။
IBC စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီးဖြစ်ရပ်ဖြစ်နေဆဲ, ထိုသို့တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိကနေသွားကြဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ဒါဟာယခု 55,000 နိုင်ငံများထက် ပို. အနေဖြင့်ရေးဆွဲထက်ပို 170 တက်ရောက်, အမ်စတာဒမ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုစက်တင်ဘာလဆွဲဆောင်။ အဆိုပါ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်နည်းပညာကွန်ဖရအရေးကြီးဆုံးအသစ်ကစဉ်းစားတွေးခေါ်ကိုဖွင့်ဖို့ရာအရပျနေဆဲဖြစ်သည်။ အဆိုပါ IBC ညီလာခံ၏အခြေခံအကျဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ပါမောက္ခဘရိုင်ယန်ကော့နှင့် will.i.am. အဖြစ်ကွဲပြားအဖြစ်ပဲခေါင်းဆောင်များပေမယ်လငျးအိမျထုတ်လွှင့်မပေးဆွဲဆောင်ခဲ့ကြရသောပြား, ဆွေးနွေးချက်များနှင့်အဓိက၏ကျယ်ပြန့်-အထိအစီအစဉ်နှင့်အတူထိုင်သောနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းစာများကများမှာ
အဆိုပါကွန်ဖရတစ်ဦးချင်းစီကနည်းပညာအတွက်အနုပညာပြည်နယ်ပြ, ပြသခဲ့သည် 1,600 နီးစပ်သူအတူတကွဆောင်တတ်၏ရာပြည့်စုံပြပွဲနှင့်အတူလိုက်ဖက်သည်။ IBC အသိပညာဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်မျှဝေဖို့နေရာတစ်နေရာအဖြစ်ပြိုင်ဘက်ကင်းသည်နှင့်၎င်း၏ကွန်ရက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်တန်ဖိုးဖြစ်ရပ်များကဆက်ပြောသည် - ဆုအနေဖြင့်ရုပ်ရှင်ပြမှ - တကယ်မတက်ရောက်များ၏တန်ဖိုးရှိဖို့ကူညီသည်။ ဒီအသစ်နှင့်အကျယ်တိုးချဲ့စျေးကွက်၏တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ IBC, အကြောင်းအရာနှင့်မီဒီယာနည်းပညာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၏မျိုးဆက်သစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်သူတို့ခြေကိုရှာဖွေကူညီပေးနေရည်ရွယ်မြင့်တက် Stars အစီအစဉ်၏နိဒါန်းအပါအဝင်ယင်း၏ပရိသတ်တွေနဲ့အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆန်းသစ်နည်းလမ်းတွေဖန်တီးဆက်လက် နှင့်သီးသန့်ဖိတ်ကြားချက်ကိုသာခေါင်းဆောင်များ '' ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်း 150 ခေါင်းဆောင်များအနာဂတ်မဟာဗျူဟာပုံဖော်ဘို့ဖြစ်ရပ်တစ်ခု။ နေရာတိုင်းမှာ IBC အကြောင်းအရာ - - သစ်ကိုလမ်းညွန်အတွက် IBC ရဲ့ထူးချွန်ယူရာ IBC လည်းဖြစ်ရပ်များ၏အသစ်တစ်ခုစီးရီးဖန်တီးထားသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းများက run IBC ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အသိပညာအားလုံးသည်သည်, ချိတ်ဆက်အနာဂတ်မှကြည့်သောဤအသစ်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်အတွက်ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။ IBC အကြောင်းအရာနေရာတိုင်းမှာချိတ်ဆက်အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာလောက၏အပြောင်းလဲနေတဲ့သဘာဝပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ IBC လိုပဲကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဆွေးနွေးငြင်းခုံခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများအတွက်ဖိုရမ်ထောက်ပံ့နည်းပညာနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအခွင့်အလမ်းများ, ဒါပေမယ့်နေရာတိုင်းမှာ IBC အကြောင်းအရာကထူးခြားဂရုတစိုက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်တဲ့ကြည့်ပေးခြင်းတစ်ဦး IP ကိုကမ်ဘာပျေါတှငျမီဒီယာဆက်သွယ်မှုများအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့သဘာဝကိုထင်ဟပ်ခြင်းနှင့်ခံစားရသည်။
ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2018-08-28
ယခင်: Dejero IBC2018 မှာ Intelligent Encoding နှင့်ကွန်ယက် Blending Software များတိုးမြှင့်
နောက်တစ်ခု: ကမ္ဘာ့ပထမဦးစွာအိတ်ဆောင်မှတ်တမ်းတင်စတူဒီယို: Infineon ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ် MEMS နည်းပညာ Zylia ZM-1 မိုက်ခရိုဖုန်းခင်းကျင်းဖွ
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "#IBC2018 အဆိုပါ Show ကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့!" ။ https://www.broadcastbeat.com/ibc2018-dont-miss-the-show/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။